China Reflow Valve Work muchoto Machine michini Reflow Valve Work muchoto / Reflow Valve Work muchoto SMT Hot Air Convection 8 Heating Zone kugadzira uye mafekitari | Eton
8 zvikamu akatungamirira kutungamirira isina R eflow muovheni ET-R8
■ Windows mashandiro inowanikwa, zvakagadzirirwa mhando mbiri kudzora muoti, kudzora kombiyuta uye nechimbichimbi Chinyorwa kuzvidzora, vane mabasa yokuchengeteka.
■ ukava kudziyisa kwadzinoita nyika pamusoro German ano, mukuru kupisa chinja unodiwa. Chete tembiricha marongero inogona kusvika anopfuura 15% kupfuura zvakafanana yokutevedzera okuwana capacity.The chete kugona zvinogona akaziva dererei pane zvakafanana michina 15-20 ℃ zvakare kuderedza inopisa zvinoriumba pamusoro pcb bhodhi uye Micro-kukuvadza.
■ Mumwe tembiricha mapazi kushandisa kumanikidzwa kuparadzirwa, yakazvimirira PID kuzvidzora, okumusoro akazvimiririra kudziyisa, tembiricha mevira mukamuri yakarurama, yunifomu, hombe kupisa vanokwanisa.
■ Nokuda rakasiyana nzira kutakura mhepo takapoteredzwa kudzoka mhepo patented magadzirirwo kuti anobvisa migumisiro yokudadira nayo pcb bhodhi kusvika pamamiriro tembiricha, pamusoro pcb revatungamiriri kudziyisa, zvinonyanya zvakaenzana uye nokukurumidza pane zvakafanana yokutevedzera.
■ yamavira Unique ndivo mhepo mamiriro mukati siyana munzvimbo echoto zvinogona akasiyana mhepo nokukurumidza musiyano anomuka nokuda yakarongeka kugadziridzwa, kupisa yunifomu .;
1) divi: 4800 * 1200 * 1450 (mm)
2) Kutanga zvachose simba: 45KW, Normal: 7KW
3) pehurumende tembiricha zones: kukwira 8 kudziyisa Nzvimbo Dzine, pasi 8 kudziyisa munyika dzine, 2 kutonhora mapazi
7) vakuchidzire nguva: <25min
8) Mesh kumhanya: 0-1.8M / Min
9) Mesh kukwirira: 900 ± 20mm
10) Mesh upamhi: 480 mm
12) Shandisa solder namatidza mhando: Kutungamirira isina solder / Zvavo solder;
13) zvinoshanda zvinoriumba kutaipa: BGA, CSP etc.single / kaviri madziro;
14) Simba zvinodzivirira: kupota;
15) Control Method: Full kombiyuta kudzorwa;
16) Furnace vachishandisa jacking humburumbira;
1.From musi rwokutenga, rusununguko pakugadzira uye kugadzira makore maviri;
2.Providing hwokugadzira inogadziridza uye michina mabasa chero nguva;
3.The Software Hurongwa chichasimbiswa upgraded kwoupenyu hwose kuitira ichangobva uye azere zvaidiwa-software shanduro pachena.
4.Provide hwokugadzira kudzidziswa basa maererano vatengi kuti zvinodiwa.
5.Can sarudza pachena dzakasiyana dzichifura bhodhi nzira uye feeder zvigadziko.
1.From musi rwokutenga, vanonakidzwa 24-awa basa
2.make foni kana-nzvimbo kushanyira vatengi vasiri yakarongwa, kuvandudza dzose maererano mutengi wacho zvinodiwa.
3.Guarantee kuti musi wazvinenge, akasununguka kupa vatengi pamwe Akachengeteka basa
Previous: 2018 New Low manwiro Valve Work Reflow muchoto SMT High Quality And High Vacuum Furnace Reflow hovhoni For pcb
Next: Large Smt Reflow muchoto pcb Valve Work Machine Smt Reflow muchoto For akatungamirira Producti
Yakazara Solution SMD Uye SMT Kugadzirwa Kwemutsara ..
2018 New Low manwiro Valve Work Reflow hovhoni ...
Large Smt Reflow muchoto pcb Valve Work Machine Smt ...
Akatungamirira, SMT Reflow muchoto For pcb, pcb Computer Chi ...